ကိုဗစ်ကို ခံစစ်နဲ့ တိုက်မှာလား တိုက်စစ်ဖွင့်မှာလား (နောက်ဆုံးမိနစ်ကျမှ အမိန့်ချလို့ မရတဲ့စစ်ပွဲ) - Zet Star
ကိုဗစ်ကို ခံစစ်နဲ့ တိုက်မှာလား တိုက်စစ်ဖွင့်မှာလား (နောက်ဆုံးမိနစ်ကျမှ အမိန့်ချလို့ မရတဲ့စစ်ပွဲ)
ကျနော်တွေးမိတာလေးပါ။ ကျနော်တို့ ကိုဗစ်ကိုတိုက်နေတဲ့ မဟာဗျူဟာကို ပြန်စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ ရန်သူခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်တိုက်နေရရင် ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ War Game ဆော့လာဖူးတဲ့ သူတိုင်းသိပါတယ်။
စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်ချင်ရင် ရန်သူ့ကိုကိုယ်ခင်းတဲ့ အကွက်ထဲဝင်အောင် ပုံသွင်းရပါတယ်။ ကြိုတင်ကြံစည်ရပါတယ်။ ကြိုစဉ်းစားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုက်မယ့်အကွက်ကို ပြည်သူလူထုက ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင် ကြိုတင်ချပြရပါတယ်။ ရှင်းလင်းစွာအသိ ပေးရပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ ကိုဗစ်ကဝင်တိုက်မှ လိုက်ခုခံနေရင် အမြဲတမ်းခံစစ် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားမရှိပါ။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ ကိုယ့်အင်အားကို အတော်တွက်ချက်ရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကို ဘယ်လိုပုံဖြစ်စေချင်သလဲ? Flatten curve (ကူးစက်မှုကို လျော့အောင်) လုပ်ပြီး တိုက်မှာလား? တရုတ်မှာလုပ်သလိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်မလား? အဲ့လိုလုပ်နိုင်ဖို့ အင်အားရှိသလား? သူ့လိုနယ်စပ်တွေ တင်းကျပ်စွ ာပိတ်နိုင်မလား? ရသလောက် Test စစ်ပစ်နိုင်သလား? သူတို့လိုငွေအင်အားရှိသလား? ကိုယ်ဘယ်လို ရန်သူကို စစ်မြူပြီး ကိုယ်တိုက်ချင်တဲ့အကွက်ထဲဝင်အောင်လုပ်မလဲ?
ရေးရင်အရှည်ကြီးပါ။ အနီးကပ်မှ လူတွေဒီလောက်ကူးစက်လို့ ဒီလောက်သေလို့ ဒါလုပ်မယ်ဆိုတာထက်။ လူတွေဒီလောက်ပဲအကူးခံမယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင် လျော့ချမယ်။ ကိုယ်တွေမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ ပစ္စည်းပစ္စယ၊ ငွေအင်အားကအစဒီလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကြိုတွေးရပါမယ်။ ဒါတွေကို အခုမှပြောတာမဟုတ်ပါ။ ကျနော်ဖြစ်စေချင်တာတွေကို အစောပိုင်းစစခြင်းကတည်းက ရေးဖူးပါတယ်။ အစောကြီးကတည်းက ပျံ့နှံ့မှုဗဟိုဟာ ရန်ကုန်ဆိုတာကြိုတွက်လို့ရပါတယ်။ လူတွေထူထပ်စွာနေကြတာရယ်။ ဆုံမှတ်ကျတာကိုး။ ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ “ကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပါ။”
အခုကျနော်တို့ ညီညွတ်စွာနဲ့ အစိုးရကိုဝိုင်းကူမှရပါတော့မယ်။ ကျနော်အခုပြောရတာက ကျနော်တို့ ကြိုတင်ပြီး စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ကိုယ်အနိုင်ရလိုတဲ့ပုံသွင်းယူတဲ့ mindset ထားဖို့ပြောနေတာပါ။ #ဒါဖြစ်မှဒါလုပ်မယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်တွေက ဒါဖြစ်အောင်ဒါလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာကိုချစေချင်တာပါ။ အခုနယ်တွေမှာ မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကြိုတင်စီမံရပါတော့မယ်။ နယ်တွေကိုပြန့်သွားရင် ကျနော်တို့အင်အားအရမ်းကျဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
စစ်တို့ရဲ့သဘောသည် တစ်နေရာကို မြန်မြန်တိုက်ပြီး မြန်မြန်ဇာတ်လမ်းဖြတ်ရပါတယ်။ ရေရှည်ဆွဲတိုက်တဲ့စစ်ပွဲတိုင်းမအောင်မြင်ပါ။ ကျနော်ထပ်ပြောပါမယ်။ ကျနော်တို့မှာ နယ်တိုင်းမှာ စစ်ပွဲတိုက်ဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်ပါ။ ဆွမ်ဇုက ” နေရာတိုင်းမှာစစ်တိုက်ရရင် အင်အားချည့်နဲ့ပြီး စစ်ရှုံးတတ်ပါတယ်။ နယ်တွေကိုပါ ကြိုတင်ကာကွယ်ကြပါ။” အဓိကပြောလိုတာက ဆွမ်ဇုပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ “စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ ရန်သူခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်တိုက်နေရရင် ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်ချင်ရင် ရန်သူ့ကိုကိုယ်ခင်းတဲ့ အကွက်ထဲဝင်အောင် ပုံသွင်းရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Objectives ချပြီး Plan, Do, Check, Act လုပ်ကြပါ။ “ကြိုလုပ်ကြပါ။” နောက်ဆုံးမိနစ်မှ အမိန့်မချကြပါနဲ့။ ပြည်သူလူထုကလည်း အစိုးရကို အတတ်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းကူညီကြပါ။ ဒီကိုဗစ်စစ်ပွဲဟာ အစိုးရတင်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ “ကိုဗစ်စစ်ပွဲဟာ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။”
← ဗဟိုစည်ဆေးရုံရဲ့ အသိပေးနောက်ကျမှုကြောင့် ယနေ့ည လမ်းမတော်မြို့နယ် အခြေအနေ
သင်္ဃန်းကျွန်းက လော့ဒေါင်း ချထားတဲ့တိုက်ကို သံကြိုးတွေနဲ့ အထပ်ထပ် သော့ခတ်ထားတဲ့ အဖြစ် →